Any amin'ny firenena rehetra dia maro no afaka milaza ireo mari-pamantarana ara-tantara sy ara-tsakramenta, monuments, toerana fivavahana ary tranom-bakoka. Singapore , na eo aza ny haben'ny fahantrana, dia tsy voarara amin'ny tantara na ny lova. Ary ny isan'ny tranom-bakoka dia afaka hifaninana amin'ny tanàna Eoropeana. Ny mozikan'i Singapore dia milaza aminareo ny tantaran'ny fampandrosoana, fa koa mikasika ny fomba nentim-paharazana sy kolontsain'ny Azia Atsimoatsinanana.
Ny mozika tsara indrindra
Ny tranombakoka voalohany any Singapore dia ny National Museum , saingy na dia efa antitra aza izy io, dia izy koa no mivoatra indrindra. Ny foibe afovoan-tanàna, tranobe manan-tantara - tsy afaka ny ho ilay iray hafa. Raha ny zava-misy, aiza koa ny mpizahantany no mahafantatra ny tantara amin'ny antsipiriany momba ny nosy amin'ny antsipiriany nanomboka tamin'ny taonjato faha-14? Ny tranombakoka dia mifototra amin'ny fanangonana manokana avy amin'i Stamford Raffles, izay nanorina ny tanàna ary nanjary governorany voalohany. Hahita tantara sarobidy manan-danja sy ara-archäologika ianao, ary handinihana ny fivoaran'ny faritra toy ny sakafo sy ny akanjo nasionaly . Ny perla ao amin'ny tranom-bakoka dia ilay vato Singapore, ny soratra tranainy izay tsy nadikaina na oviana na oviana. Indraindray dia ilaina ny manamarika ny fitaovana elektronika lalina ao amin'ny tranom-bakoka, izay manampy betsaka indrindra ny mitsambikina any amin'ny lasa nosy.
Ny Tranomboky Maritime dia mitantara ny fivoaran'ny sambo sy ny varotra an-dranomasina. Ny tranombakoka dia niaro ny sambo taloha sy ny modely amin'ny entana entana. Ho an'ny mpizaha tany, maro ireo fivarotana fivarotana an-tsena no misokatra.
Ny tranombakoka momba ny zavakanto sy ny siansa ao Singapour dia fikasana mahaliana hampifandray ireo fomba roa amin'ny hevitry ny hevitra. Ny tranobe telo ao amin'ny tranom-bakoka dia maneho ny fomba fiasa manomboka amin'ny hevitra, manambara momba ny nofinofin'i Leonardo da Vinci, ny fahitana sinoa tranainy, ny fomban'ny robotics ary ny fisehoan-javatra sy ny zavakanto hafa. Ny tranobe amin'ny endriny lotus dia sady fampiratiana, ary fanehoan-kevitra ny fifandraisana akaiky amin'ny siansa sy ny zavakanto.
Tamin'ny farararan'ny taona 2014, nanokatra ny fampirantiana maharitra maharitra 20 taona tany Singapour, ny fahafito tany Asia taorian'ny Hong Kong ny tranombakoka malaza Tameameuds . Miandry ny kopian'ny kalitao Elizabeth II sy Barack Obama, Tom Cruise ary Muhammad Ali, Bjens sy Elvis Presley ianao. Ny tranombakoka dia nanomana tarehimarika 60 ho an'ny fanokafana, anisan'izany ireo, Madame tenany. Ireo tarehimarika rehetra ireo dia azo henoina, ary ireo efitrano ireo dia fitaovana mba hahafahanao mampiasa ireo fitaovana sy hipetrahana ny tena mampiavaka ny sary.
Ny tranombakoka ho an'ny kolontsaina Aziatika dia fitotoana amin'ny fomban-tany atsinanana, ny angano sy ny lovany. Nangoniny ny karazana trano sy ny zavakanto nampiharina. Ny efitra 11 dia maneho ny fahafenoan'ny kolontsaina any amin'ireo firenena samihafa any Azia tahaka an'i Sri Lanka, Indonezia, Filipina, Malezia, Thailandy, Kambodza ary ny hafa. "Reniranon'i Singapore" - ny haingo lehibe dia natokana ho an'ny loko Aziatika.
Tranom-bakoka fialokalofana tsara indrindra any Singapore , angamba, mahafinaritra, fianakaviana ary maniry. Ny efitrano rehetra ao amin'ny galleries 3D dia misy karazany zato (sary hosodoko sy sary sokitra) ary natao mba hahatonga ny mpitsidika ho anisan'ny fampirantiana ho an'ny sarin'izy ireo, mba hahazoana fahafaham-po, eny fa na dia ny fanamarihana sori-dàlana aza.
Fort Musoso dia tranom-bakoka miaramila an-kalamanjana any amin'ny nosin'i Sentosa, izay nanolo-tena ho an'ny fitsidihan'ny fianakaviana. Ny tranobe dia natsangan'ny Britanika tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, fiarovana mafy tokoa izany. Izy io dia misy lavaka ety ambany sy toeram-pialofana an-habakabaka, fitaovam-piadiana maro samihafa. Ny toeram-ponenana dia voaravaka tarehim-bolamena mba hamerenana ny rivotra mety. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia tsy nisy ny ady Fort Siloso dia mitana ny endriny voalohany.
Ny Museum Museum Red Dot dia tranombakoka lehibe indrindra amin'ny vahaolana maoderina any Asia, mitahiry maitso maitso maitso maitso maitso . Ny toe-javatra ao amin'ny tranombakoka dia mamorona, afaka manohina ny toerana rehetra ianao ary manandrana mamorona zavatra avy aminao ihany.
Ao Singapore dia misy tranom-bahinin'ny mailaka sy mailaka - tranombakoka filateliana . Nosokafana tamin'ny 1995 izy mba hampitombo ny fahalianana amin'ny lova sy ny lova ara-kolontsain'ny firenena, izay sary natao tamin'ny pirinty. Isan-taona dia manaiky fampirantiana vonjimaika amin'ireo fanangonana malaza manerantany ny tranombakoka. Ny tranombakoka dia manana tranokala tsara indrindra.
Ny Museum of Modern Art of Singapore no fanangonana kolotsaina lehibe indrindra eran-tany amin'ny asan'ny taonjato faha-20. Ny fanangonana ny tranom-bakoka dia ahitana sary hosodoko, sary sokitra ary fametrahana ny mpanakanto ankehitriny ny nosy sy Azia. Ny tranombakoka dia mazàna mitazona fampirantiana vahiny avy any Azia, Etazonia ary Eoropa.
Ao Singapore, misy toerana mahafinaritra ho an'ny nostalgia - tranom-bakoky ny kilalao ankizy , tontolo iray amin'ny fahazazana. An-tserasera manokana momba ny 50.000 ny zavatra, izay nandritra ny 50 taona mahery, dia nanangom-piantohana an'i Chang Young Fa. Hahita tahiry saribakoly plastika sy zana-posy ianao, miaramila ny taratra rehetra, kilalao marefo, lalao voalohany amin'ny pilina ary ny maro hafa. Ny kopia ny kilalao rehetra dia azo vidiana amin'ny fivarotana fahatsiarovana.
Firenena maro samihafa i Azia ary samihafa, ary mba hahatakarana azy, tao Singapour, nosokafana ny Museum Peranakan . Notokanana tamin'ny taranaky ny lehilahy mpifindra monina sy ny vehivavy Malay, izay nantsoina hoe "baba-nyanya". Ao amin'ny tranom-bakoka dia misy fitaovana fandroana an-dakozia, zavatra vita an-trano, fanaka sy akanjo izay miresaka momba ny tantaran'ny fampandrosoana an'i Singapore.
Raha miresaka momba ny tranombakoka, tsy azonao atao ny tsy miraharaha ny Centre Science momba ny Siansa ao Singapour , izay toerana tiany hakana saina. Ny efitranony dia nofinofin'ny mpahay fizika na jeôgrafia, izay mampiseho mazava tsara ny fanombohan'ny tsunami, manomboka ny fiainana, mitranga ny fihenan'ny tselatra. Azo henoina avokoa ny zava-drehetra ary mety ho sangisangy mihitsy satria Ny tranombakoka dia manana laboratoitra fofona manokana. Isan-andro dia misy fanandramana mahatalanjona maro natao ato. Ny Science Center dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra izay ahafahanao mandany andro miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Ny mpankafy tantara, indrindra fa ireo liana amin'ny vanim-potoan'ny Ady Lehibe Faharoa, dia liana amin'ny fitsidihana ny tranokalan'ny Battle Box na ny Bunker. Izy io dia naorin'ny British tamin'ny 1936 mba hiarovana amin'ny fanakatsakanana an-dàlambe ao amin'ny foibem-pitondrana, manana efitra 26, ary rindrina iray metatra matevina. Ny bunker dia nampiasaina ho an'ny tanjona hatramin'ny faran'ny taona 1960. Ankehitriny, ny tranombakoka dia nanavao ny sarin'ilay sakana bunker tamin'ny Febroary 1942.
Mankafy ny loko mozika any atsinanana, tadidio fa any Singapore no tsy ekena hanao fanamarihana ampahibemaso, fa ny lalàna miorina amin'ny firaketana no voaron'ny lalàna. Ny ray aman-dreny dia mila mitandrina amim-pitandremana ireo ankizy, izay toerana takiana, raha tsy izany dia hangatahana daholo ny rehetra ary mety hiteraka sazy.
Aterineto any Kambodza
Ny sakafo ataon'ny renim-pianakaviana - ny volana faharoa
Demi Moore dia namoaka vola 715 ho an'ny fivoriana iray ho an'ny alikan-jaza
Ahoana no tsy ahafahako mahazo zaza raha marary ny reniko?
Ny kapa ho an'ny vehivavy
Voninkazo voninkazo ho voninkazo
Biomagnets ho an'ny fatiantoka
Ny ampitso taorian'ny nofy dia manjò ny tongotra, mampalahelo ny fanafihana
Ahoana no hanamboarana lobaka?
Lindsay Lohan nandositra tany Dubai tsy nandoa hetra tany Etazonia
Toe-kavoana mahazatra ho an'ny efitrano
Lalana Celebrity Street
Jennifer Lopez, 46 taona, dia lasa zazavavy 12 taona
Famoronana efitrano ao Khrushchevka
Star beauties niady tao amin'ny carte mena Billboard Music Awards-2016
Ahoana ny fanaovana pasipaorony amin'ny Internet?
Bamboo 3d panala ho an'ny rindrina
Mpilalao sarimihetsika 12 izay nanatri-maso ireo sarimihetsika malaza, teo amin'ny toerana "mahaliana"
Ashley Graham, Emily Ratjakovski ary Kendall Jenner ao amin'ny lahatsary vaovao momba ny firaisana kristiana amin'ny kalandrie LOVE